ကျွန်မနှင့် စိတ်ညစ်ညူးဖွယ် အသီး | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
July 22, 2008, 3:05 am
Comment by may July 22, 2008 @ 4:25 am
အပေါ်က အီးမေးနဲ့ဖစ်သွားလို့ ညီမလေးရေ
Comment by chaos July 22, 2008 @ 4:27 am
ဟုတ်ပါ့။ အမလည်း ဒူးရင်းသီးနဲ့ မခံနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ တခါမှလည်း မစားဖူးဘူး။ ဒူးရင်းသီးနံ့ရရင် လူက ခေါင်းတွေမူးလာတာ ဘာနဲ့မှ မတူဘူး။ အိမ်မှာဆို အမ ရှိနေချိန် ဘယ်သူမှ ဒူးရင်းသီး မစားကြဘူး။ NTUC ရှေ့က ဖြတ်ရင် အရမ်းဒုက္ခရောက်တယ်။ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အမြန် လျှောက်ရတာ။
Comment by s0wha1 July 22, 2008 @ 7:36 am
ဟုတ်တယ်ဗျိုး….ကျနော်လည်း ငယ်ငယ်က ဒူးရင်းသီးဆိုရင် သကြားလုံးမှာ ဒူးရင်းသီးအနံ့ပါတာကို သူများစားရင်တောင် ကိုယ်က ဘေးကထိုင်နေရင်း ခေါင်းမူးတတ်တာမျိုး။
အဟီး…အခုတော့ ကြိုက်သွားပြီ။ ဒီလိုလေ။ မဒမ်ပေါက မော်လမြိုင်သူ။ ဒူးရင်းသီးအရမ်းကြိုက်။ စင်္ကာပူရောက်လာတော့ အဲဒီ ဒူးရင်းသီးကို ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်စားသဗျား။ ကျနော်က မကြိုက်တဲ့အလျောက် ဘေးက သူစားတာဘဲ ထိုင်ကြည့်နေရင်းက စိတ်ထဲမှာ တပန်းရှုံးတယ်လို့ ခံစားရသဗျား။ အဲဒီတော့ အားကျမခံ အားထုတ်ပြီး စားကြည့်လိုက်သဗျား။ အခုတော့ အရသာစွဲသွားပြီ။
စင်္ကာပူ စကားနဲ့ ပြောရရင် Kiasu ဖြစ်တာပေါ့နော။ မလင်းလက်လည်း တခါလောက် ကြိုးစားပြီး စားကြည့်ပါလား။ မလင်းလက် ၀င်စားလိုက်ရင် မိသားစုက ကျန်တဲ့လူတွေလည်း သူတို့ဝေစုလျော့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်စားချေပြီးသားဖြစ်အောင် အကြံကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Comment by Ko Paw July 22, 2008 @ 7:39 am
အန်တီလဲ ဒူးရင်းသီးအနံ့ရတာနဲ့ ခေါင်းမူးပြီး အန်ချင်တာပဲ။ တခါတလေ ဆို ကြာကြာ ရနေရင် အန်ပစ်တာပဲ။ ကြိုက်ကို မကြိုက်ဘူး။ ဒူးရင်းသီးသကြားလုံး၊ ဒူးရင်းသီး ရေခဲမုန့်။ ဒူးရင်းသီးနံ့ နည်းနည်းပါတာတောင် စားမရ ။
Comment by ခင်မင်းဇော် July 22, 2008 @ 4:00 pm
I like Durain very much. Feeling like I am in heaven when I am eating it:D
Comment by Anonymous July 23, 2008 @ 4:37 am
ဒူးရင်းသီး မကြိုက်တဲ့ ဘလော့ဂါများပေါ့ဗျာ ဟားဟား….
Comment by ဗမာပြည်သား July 24, 2008 @ 7:43 am
ဟုတ်တယ်..တို့လဲဒူးရင်းသီးဆိုတာနဲ့ပြေးတော့တာပဲ… စားစရာတွေမှာအဲဒီအသီးနံ့ ပါရင်မစားတော့ဘူး.. အရသာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပြောပြော အနံ့နဲ့ တင်တော်ပါပြီ..
Comment by Anonymous July 24, 2008 @ 7:47 am
ဘယ် သူ ဘာ ပြော ပြော အနော် တော့ တအား တအား ကြိုက် ပါ တယ်
Comment by zaonoik July 28, 2008 @ 4:05 pm
22 ka ayann ayann kyite par tal,,durin so yinathal swal bya..hehe…ayann kyite ei,,, always sar ng ei,,, hekhek,,, kyite tal loh pal pyaw tot mal,, ma pyaw tat tot buu bya,, heeeeeeeeeez
Comment by saw naing August 17, 2008 @ 3:32 pm